ဘလက်ချော-ကေဇီ မြူးဇစ် ဒိုင် ယာလော့ခ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဘလက်ချော-ကေဇီ မြူးဇစ် ဒိုင် ယာလော့ခ်
ဘလက်ချော-ကေဇီ မြူးဇစ် ဒိုင် ယာလော့ခ်
Posted by black chaw on Oct 22, 2014 in Community & Society, Entertainment, Music, Society & Lifestyle | 42 comments
Real Black !!!!!!
မန်းလေး ဂဇက်ရဲ့ နာမည်ကျော် မန္တလေးသူ ဒေါ်ကေဇီ နဲ့ သီချင်းအကြောင်းဆွေးနွေးထားတာလေးပါ။
ပြောထားဆိုထားကြတာ ၂ လ လောက်ရှိနေပါပြီ။
အချိန်မရတဲ့ ကြားကတင်ရတာမို့ လိုတာရှိရင် ဖြည့်ဖတ်ပေးကြဖို့ တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်။
Mr. Black – မကေဇီ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ…။
ကေဇီ – ဟော့ !!! မင်္ဂလာပါ ဦးဘလက်…။
Mr. Black – ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ သီချင်းတွေအကြောင်း ပြောကြရအောင်ပါ။
ကေဇီ – ဟော့…။
Mr. Black – Music ဆိုတဲ့ စကားလုံးအပေါ် မကေဇီ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေး သိပါရစေ။
ကေဇီ – ဂီတ/မြူးဇစ် ဆိုတာ ဖန်တီးမှု ရသ မြောက်ရင် ရင်ထဲ ရောက်ဖို့ အမြန်ဆုံး အထိရောက်ဆုံး အနုပညာလို့ မြင်ပါတယ်ဗျ။
Mr. Black – မကေဇီ အနေနဲ့ပေါ့နော်…၊ သီချင်းတွေကို ဘယ်အချိန်က စပြီးနားထောင်တတ်ခဲ့ပါသလဲ။
ကေဇီ – ကျနော် ဘယ်အရွယ်မှာ သီချင်းနားထောင်လည်း ဆိုတော့ ပြောရ ခက်သားဗျ။ အလွယ်ဆုံး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ သိတတ်စ လို့ပဲ ပြောရမယ်။ ကျနော့ အမေတို့ စ စ နေကြတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကျနော်က စ စကားပြောတတ်တော့ ရ လ တဲ့။ ဘယ်လောက် စကားများမဲ့ ဗီဇ တုန်း အစိမ်းစားကြည့် (အဲလေ) စဉ်းစားကြည့်!!
ကျနော် ၁နှစ်ကျော်လောက်ရောက်တော့ သီချင်း ဆိုနေပြီ ပြောတယ်ဗျ။ ဘာတဲ့ မေခလာ ရဲ့ ဟို သီချင်းရယ် လေ၊ “တို့ နှစ်ဦးရယ်၊ ကမ္ဘာကြီးရယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို။ ကြားသလို ဆိုတာ တဲ့ “တို့ နှစ်ဦးရယ်၊ ဘဂျီးရယ်” ဆိုပြီး ခြေထောက်များတောင် စောင့်လိုက်သေးသတဲ့။
အဲဒီတုန်းက အဖေက ချစ်ကောင်း၊ ခင်မောင်ထူး၊ ဂျေညီညီ၊ ဂျေမောင်မောင်၊ စိန်လွင်၊ ဘိုဘိုဟန်၊ ပလေးဘွိုင် သန်းနိုင်၊ တူးတူး၊ ဗစ်တာခင်ညို စတာတွေ နားထောင်တော့ အကုန်နားယဉ်ခဲ့တယ်။ အမေကတော့ မေခလာ၊ နော်လီဇာ၊ ဟေမာနေဝင်း၊ အယ်လခွန်းရီ၊ ပုလဲ စတာတွေ နားထောင်တော့လည်း တမင်နားမထောင်ရပဲ ကြားနေရတာပဲ။
အဲ။ မန်းလေး က အဘိုး အိမ်များသွားလည်ရင်လားးး
အဲဒီ အိမ်မှာ စိုင်းထီးဆိုင် ခရေဇီ က တစ်ယောက်၊ လွှမ်းမိုး ခရေဇီ က တစ်ယောက်၊ မေဆွိ ခရေဇီက တစ်ယောက်၊ ခင်မောင်တိုး ခရေဇီက တစ်ယောက်။
အဲဒီလို သီချင်းရော အဆိုတော်ကိုပါ ခရေဇီဖြစ်တဲ့ သူတွေကြားမှာ သီချင်း အကုန်လုံးကို မစိမ်းခဲ့ဘူးး။
Mr. Black – ထူးထူးခြားခြား ကြိုက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေများရှိခဲ့ရင် ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။
ကေဇီ – နည်းနည်း ရွေးချယ်တတ်တဲ့ အရွယ်ကျတော့ စပြီး ရွေးဝယ်ဖူးတဲ့ အခွေလေးး မှတ်မိသေးတယ်။
တင့်တင့်ထွန်းရဲ့ လိုတရ၊ ကျနော် ၆ တန်းးးး၊ မတင့် ကို သိပ်ချစ်တတ်ပြီ။ ခိခိ။
နောက်တစ်ခွေက ဆေးဆိုးပန်းရိုက် မျက်နှာ၊ မှတ်မိသလောက် ၆/ရ တန်းပဲ။ အိမ်က လူကြီးတွေကလည်း သူတို့ ခေတ်က သီချင်းတွေမို့ နားထောင်ရတာကို ကြိုက်ခဲ့ကြတော့ ပြဿနာ သိပ်မရှိဘူးးး
အဲဒီ အရွယ်လောက်မှာပဲ မျိုးကျော့မြိုင် ရယ်၊ ရဲသွင်ရယ် ကို စနားထောင်တတ်တယ်။ အိမ်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဖွင့်တဲ့ ဗဒင်နဲ့ တာရာ ကတော့ မရချင် အဆုံးး…
နောက် ကျနော် ၉ တန်းကို အဖိုးအိမ်မှာနေပြီး မန်းလေး ကျောင်းတက်တော့ အိမ်ရဲ့ အကြိုက်အောက်ကလွတ်ပြီ။
အဲဒီမှာ ပထမဆုံး ဦးစောနု သင်တန်းမှာ ဆုရတဲ့ သူ ၂ ယောက် တစ်နှစ်တည်းမှာပဲ အခွေထွက်တယ်။
အဲဒီမှာ စ ရူးတာပဲ။ ကိုယ်များ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်လို့ မိန်းမယူရင် မမော်ကိုပဲ ယူမှာ ဆိုပြီး ဖြစ်တဲ့ အထိ တင်ဇာမော် ခရေဇီ။ ခုချိန်ထိ ဘယ်သူ ဘယ်လောက် အသံကောင်းကောင်း မမော်မှ မမော်ပဲ။။
Mr. Black – အော်…မကေဇီ က တင်ဇာမော် ခရေဇီပေါ့နော်…။
နောက်…မကေဇီ အနေနဲ့ Band တစ်ခုခုကိုများ ခရေဇီဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား…။
ဥပမာ – Emperor သို့မဟုတ် IC တစ်ခုခုပေါ့။
ကေဇီ – တီးဝိုင်းထဲတော့ ဘယ်ဟာကြိုက်လည်း မမေးပါနဲ့။ တူရိယာ ဘာမှ မတီးတတ်
နားမလည်လို့ မပြောတတ်ဘူးး ဝေထွန်းကို ကြိုက်တုန်းက အင်ပါယာကို ကြည့်တယ်။ ဒီလောက်ပဲ။ ငိငိ ။
Mr. Black – ဒါဆို မကေဇီ က ဝေထွန်း ကိုလည်း ကြိုက်ခဲ့ဖူးတာပေါ့နော်။
ဝေထွန်းကိုကြိုက်တာက ရုပ်ကိုလား…။ Drum တီးတာကို ကြိုက်တာလား…။ အဲဒါလေးဖြေပေးပါဦး…။
ကေဇီ – ၂ ခုလုံး…။ ခွိခွိ
Mr. Black – ဝေထွန်း က ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဝင်အော်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခင်ဗျား နားထောင်ဖူးလား။
ကေဇီ – ဟုတ်၊ သိတယ်။ ခဏ သီချင်းနာမည် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ ၆ တန်းတုန်းကတည်းက ဆိုတော့….
မယ်သီတာ ခိုးတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းထင်တယ်။
Mr. Black – သူ့အသံက သန်းနိုင်အသံနဲ့ တစ်သံတည်းလိုဖြစ်နေတာဗျ။ မိုက်တယ်ပေါ့နော်။
ကေဇီ – ဝေထွန်း အသံက ရိုးတယ်။ ဆွဲဆောင်မှု သိပ်ထည့်မထားဘူး။
အခြေခံ အသံတော့ တူချင်တူမှာပေါ့။ ကျနော် အဲလောက် ကြီး သတိမထားမိဘူးး…
ဘာလို့ ဆို သန်းနိုင် အသံကို စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူဘူး ဆိုပြီး သီးသန့် ထင်ထားမိလို့ နေမယ်။
Mr. Black – ကြည့်ရတာ သန်းနိုင်ကိုလည်း အရမ်းကြိုက်ပုံရတယ်နော်။
ကေဇီ – အင်းဆို။ လူရော အသံရော သီချင်းရောအရမ်းကြိုက်တာ။ ။
ဘယ် ဟာ ရွေး ပြောရမှန်းမသိလို့ ချန်ခဲ့တာ။
Mr. Black – တေးရေးဆရာတွေထဲကရော အကြိုက်ဆုံးဆိုတာမျိုးများ ရှိမလား။
ကေဇီ – တေးရေးထဲ ဘယ် အချိန်မဆို ကြိုက်တဲ့ စာသားတွေက ကေအေတီရယ်
အဲ။ မျိုးကြီး ဆိုတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက် နားထောင်ပြီး ဖိုးကာကိုလည်း ကြိုက်တဲ့ တေးရေး စာရင်းထဲ
Mr. Black – ကေအေတီ နဲ့ မြင့်မိုးအောင် တို့ကို ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ကော်ပီသီချင်းတွေကိုပဲ ကြိုက်တဲ့
သဘောများလား။ သူတို့က ကော်ပီရေးကြတာများတယ်လေ။
ကေဇီ – အမှန်တော့ သီချင်းတိုင်းကြိုက်ရင် စာသားကိုကြိုက်တယ်။
စာသားကြိုက်ရင် တေးရေးကို သဘောကျတာပဲ။
ဆိုတော့ အသံရယ်၊ စာသားရယ်၊ သံစဉ်ရယ်၊ နားရယ်၊ နှလုံးသားရယ် တစ်ချိန်တည်း တစ်ထပ်တည်း ကျတဲ့ သီချင်းတိုင်း ကြိုက်တာပဲလို့ ပြောရမယ်။
Mr. Black – မကေဇီ အနေနဲ့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်း ဆယ်ပုဒ်လောက် ပြောပြပေးပါဦး။
ဘာလို့ ကြိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ တကွပေါ့။
ကေဇီ – နားထောင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကနေ ၁ဝ ပုဒ်ပဲ ရွေးရမယ် ဆိုတော့ နည်းဘူးလားဗျ။
နောက်တာပါဗျာ။ ရွေးပေးပါ့မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။
ကျနော်က သီချင်း ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးမှာ ဆိုတော့ အဆိုတော် က ထပ်ချင်ထပ်မယ်နော်။
နားထောင်သက် အနှစ် ၃ဝ မှာ အကြိုက်ဆုံး သီချင်း (၁၀) ပုဒ်ကတော့ ရွေးရခက်လွန်းလို့ စိတ်ထဲ အထင်ကရ ပေါ်လာတဲ့ ၁ဝ ပုဒ်ကိုပဲ ပြောသွားမယ်ဗျာ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ။
ပြောရတာ ၁ဝ ပုဒ် နည်းထာ။
Mr. Black – အိုကေပါဗျာ။ ဖီလင်ရှိတဲ့ သီချင်းတွေသာ ပြောပြပေးပါ။
ကေဇီ – (၁) ချစ်သူမောင်
ကျနော် ရ တန်းအောင်တဲ့ နွေရာသီမှာပဲ ရတီပွင့်ဦးရဲ့ သီချင်းခွေထွက်သဗျ။
နားထောင်မိတဲ့ထဲ “တိမ်တွေကို စီးပြီး မင်းရှိရာဆီ အရောက်၊ အရောက်လာမယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းရယ်၊
ချစ်သူမောင် သီချင်းရယ် ကို အမှတ်ထင်ထင် ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ သီချင်းရယ်လို့ စဆိုဖြစ်တော့ ၁ဝ တန်းဖြေပြီး နှစ်လောက် မှ ဆိုဖြစ်တယ်။ မိုက်ကိုင်ဘူးတယ်ခေါ်မပေါ့။
လူက အဂေါက်၊ ကိုကိုတွေ မောင်တွေပါတဲ့ မိန်းမသီချင်းဆို မဆိုချင်တော့၊ အမျိုးသား အဆိုတော်သီချင်းတွေချည်းစ ဆိုတယ်။
မမော် အင်တာဗျူးး တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ မမော်ကလည်း မောင် ပါတဲ့ သီချင်းကို မဆိုဘူးတဲ့ဗျ။ ဘာရယ် မဟုတ် အဲဒီ အဖြေလေးကို တအားချစ်တာရယ်။
နောက်ပိုင်း အတွဲခွေ မှာ သူ “ချစ်သူမောင်” ကို ပြန်ဆိုပါတယ်…
ဒီတစ်ပုဒ်ပဲ မောင် ပါတဲ့ သီချင်းကို ဆိုပါမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း ဒီ တစ်ပုဒ်ပဲ လိုက်ဆိုတယ်။ ကြိုက်တယ်။
အဲ! တစ်ခုပဲ။ ရိုက်ထားတဲ့ အမ်တီဗီ ပုံစံကြီးကို မကြိုက်ဘူးးး။ ရေးတဲ့သူက နောင်နောင် (ဆန်းဖလားဝါး) ထင်တယ်။
Mr. Black – နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပါဦး။
ကေဇီ – (၂) ရင်ခုန်အချစ်
မောင်သစ်မင်း ရေးတဲ့ သီချင်းး။ ခပ်မြူးမြူးပါ၊
ဒါပေမဲ့ ဦးချစ်ကောင်းကြီးနဲ့ တွဲလိုက်တဲ့ သီချင်းတိုင်းက ကြွသွားတတ်တာကိုးးဗျ။
ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းထုတ် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
ဘယ်လို ရင်ခုန်တယ် ငါလေ မသိတော့ ဒါအချစ်လားးးး၊
ရင်ခုန်သံ မြန်မြန်ပဲ၊ ငလျင်တုန်သလိုပဲ၊ သိရဲ့လား အချစ်ကြောင့်လေ…
ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ၊ ပြောလိုက်တော့ကွယ် အချစ်ရယ် သိပ်သိချင်
ယုံကြည်နေချင်ရဲ့၊ ချစ်တယ် ပြောပါတော့၊
ဘာဖြစ်မလဲ၊ မသေချာတော့လေ၊ ဒီ အခြေအနေကို မယုံမရဲ နဲ့ ဒါအချစ်လားး”
စာသားကတော့ မှတ်မိသလောက် အနီးစပ်ဆုံး ဆိုပြတာ။
ဦးချစ်ကောင်းကြီးကို နဂိုတည်းက သိပ်ချစ်တာမှာ အဲဒီ သီချင်းကို အနှုတ်အသိမ်းလှလှနဲ့ အသံအဖြတ်အဆက်ကိုမိအောင် လေသံမကျပဲ ဆိုသွားတာကို တအားကြိုက်ခဲ့တာမို့ မှတ်မှတ်ရရပဲ။
ရှိုးမှာ မိုက်ခရိုဖုန်းကို ကစားသွားနိုင်တဲ့ အဆိုတော် အနေနဲ့လည်း မှတ်မှတ်မိမိရှိတယ်။
ကျနော် တော်တော်ကြိုက်ပြီး အမှတ်ရနေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
Mr.Black – အဲဒါ သန်းနိုင်ကြီး သီချင်းဗျ။ ချစ်ကောင်းက ပြန်ဆိုတာ။
၂ ယောက်လုံးဆိုထားတာ မိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
ကေဇီ – (၃) ညပုံပြင်
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုငှက်သီချင်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားတိုင်း သူ့ အသံနဲ့ ဒီ သီချင်းကိုပဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်ပေါ်လာတယ်။ မဆုံးခင် ထွက်တဲ့ အခွေထဲကထင်ပါတယ်။
Mr. Black – အစိမ်းရောင်ရက်စွဲများ စီးရီးထဲက သီချင်းဗျ။ မဟာဝီရ အိုဗုဒ္ဓ သီချင်းပါတဲ့ စီးရီးလေ။
ကေဇီ – စိတ်ထဲ နွေဦးကံ့ကော် သီချင်းလည်း ကြားယောင်တတ်ပေမဲ့ သီချင်း အမြူးကို ပိုကြိုက်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ခု သီချင်းကိုပဲ ရွေးပါတယ်။
ကိုငှက်ရဲ့ မာစတာပိ(စ) အများကြီးရှိတဲ့ထဲက ဒီ သီချင်းကို ဘာလို့ အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်တုန်း မေးခံရလည်း မတတ်နိုင်တော့ဘူးး
အယ်ဖြူရေးတာဗျ။ သူရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားထဲ ဒါမျိုး နည်းနည်းရှားသလားလို့။
“ဖန်ခွက်ချင်း ထိခတ်တဲ့ ခဏမှာ” ဆိုတဲ့ စာသားရှေ့က (ချွင်) ဆိုပြီး ဖန်ခွက်ချင်းထိသံလေး က အစ ပါတာကို ကြွေတာရယ်။
ဒီ တစ်ခွက်ပြီး နောက်တစ်ခွက် နောက်တစ်ခွက် နောက်တစ်ခွက်မှာ အသိတွေ ဝေဝါးခဲ့၊,
နွေးထွေးလွန်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ နောက်ဆုံး အသိပဲ~~
အမှန်တော့ စာသား နည်းနည်း ကလက်တာကို ကိုငှက်ရဲ့ အသံအေးအေးကြောင့်ထိန်းသွားနိုင်ပြီး ပိုလှသွားတဲ့ သီချင်းမို့လို့ ကြိုက်တယ်ဗျာ။
အမ်တီဗီရိုက်ထားတဲ့ ပုံကို မကြိုက်ဘူးဗျာ။ ဒီထက် ရင်ခုန်စရာကောင်းအောင်ရိုက်လို့ မရတော့ဘူးလားတော့ မသိ။
Mr. Black – MTV က ကိုနိုင် ရိုက်တာဗျ။ နိုင်းနိုင်းနဲ့ နန္ဒာလှိုင် သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
ကေဇီ – (၄) ရွာသာရွာပါ မိုး
မိန်းကလေး အဆိုတော်ထဲ အသံကို မမော်ပြီးရင် မဒီကိုပဲ ကြိုက်ခဲ့တယ်။
အဲ!! မဒီ သီချင်းရယ်လို စဉ်းစားလိုက်ရင် ၂ ပုဒ်ပဲ ခေါင်းထဲ အရင် ပေါ်လာတယ်။
ဆန္ဒ တစ်စုံရယ်၊ ရွာသာ ရွာပါမိုး ရယ်။
ဒီ အပိုင်း မှာ စုံတွဲ သီချင်းတွေ မပြောတော့ဘူးဗျာ။
ရွာသာ ရွာပါ မိုး ကိုပဲ ပြောတော့မယ်။
မဒီမှာ အသံ ပါဝါပြတဲ့ သီချင်း များလို့ လားတော့မသိဘူးး။ သူ့ အသံအားကို ဒီ သီချင်း အမြူးက ပြန်ထိန်းသွားသလိုမို့ ဒါလေးကို စိတ်ထဲပိုစွဲတယ်။
သာမာန် အားဖြင့် ကျနော်က မိုးရာသီကိုလည်း မကြိုက်ဘူးး မိုးရွာတာကိုလည်း စိတ်အနှောက်အရှက်ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မဒီရဲ့ အဲဒီ ရွာသာရွာပါမိုး သီချင်းနားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းးး မိုးကို အရင်ကထက် နှစ်သက်လာသလိုပဲ။
မိုးရွာချိန်နားထောင်မိရင် မိုးရွာထဲ ပြေးချင်စိတ်ပေါက်တဲ့ အထိ ဆိုပေါက်လေး လှတယ်ဗျာ။
နောက်ပိုင်း ငယ်ငယ် ပြန်ဆိုတာတောင် မကြိုက်ဘူးးး။
ရေးတာက ကေအေတီ ထင်တယ်။
Mr. Black – ရွာသာရွာပါမိုး ဒီးဒါဒီး ဒီးဒါဒီး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး။
အဲဒါ ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းဗျ။ ကေအေတီတစ်ယောက်တည်းရေးတာမဟုတ်ဘူး။
Rခိုင်နဲ့ တွဲရေးတာ။ တေးရေး ကေအေတီ + Rခိုင် ပေါ့ဗျာ။
ကေဇီ – နောက်တစ်ပုဒ်က (၅) လှည့်ကြည့်ပါဦးလား
အသံချိုထဲမှာတော့ သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကလေးမမို့ သူ့ သီချင်းတွေကို မလွတ်တမ်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။
သီချင်းတိုင်း ပညာကုန်ပြတာမို့ သူ့ အသံချည်းပဲ နားထောင်ရင် ဆိုနေတာလွယ်လွယ်လေးလိုပဲ။ လိုက်ဆိုကြည့်မှ အသက်ထွက်မတတ် အမော ဆို့ရတဲ့ အသံပိုင်ရှင်ပေါ့ဗျာ။
အယ်(လ) ဆိုင်းဇီ ပါ။
အဲဒါကြောင့် ဘယ်သီချင်း ဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် သူပထမဆုံး မေမြို့ပွဲမှာ ခပ်ရိုးရိုး ဆိုခဲ့တဲ့ လှည့်ကြည့်ပါဦးလား သီချင်းကို စိတ်ထဲမှာ အမှတ်ရဆုံးပါပဲ။
ဒီ သီချင်းကိုပဲ အယ်(လ) လွန်းဝါ က သူ့ ဗားရှင်းနဲ့ သူပြန်ဆိုထားတာ ရှိသေးတယ်ဗျ။
ကျနော် အသဲကွဲတုန်းက ဒီ သီချင်းချည်းပဲ ဆိုင်သွားတိုင်း ဆိုမိလို့ အဲဒီ သီချင်း ဆိုမယ်ဆို မခေါ်ဘူး ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေ အကြပ်ကိုင်တာခံရဘူးသဗျာ။ ဟိ။
“ငါ့ အချစ်များးးးး မြင်နိုင်ရင် လှည့်ကြည့်ပါဦးလားးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး”
Mr. Black – မိန်းကလေး အသည်းကွဲအဆိုတော် လို့ တောင် တင်စားကြတဲ့ L ဆိုင်းဇီ ရဲ့ နာမည်ကြီး
ကေဇီ – (၆) စိတ်ကူးနဲ့ ရူး
အယ်(လ) လွန်း ဝါ အယ်လဘမ် ထွက်တော့ အပေါက်ဆုံးက အချစ် မျက်ဝန်း သီချင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ။
မျက်ဝန်းချင်းတူရင် စည်သူလွင်ရဲ့ မျက်ဝန်း သီချင်းကို ကို ပိုကြိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အခွေထဲက “စိတ်ကူးနဲ့ရူး” သီချင်းကိုတော့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ နားထောင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူးး အဲဒီ သီချင်းကြားရင် ငိုချင်စိတ်ကိုဖြစ်တာ။
သူ့ အသံရယ် မုဒ် ရယ်က အဲဒီ သီချင်းမှာ ပိုမိသလိုပဲမို့ ထင်ပါရဲ့။
ထူးအိမ်သင် ဆီက ဆိုပေါက် ရလိုက်ပေမဲ့ မုဒ် ကို ရလိုက်တယ် မထင်ဘူးး။
ကျန်တဲ့ သီချင်းတွေမှာ သူ့ကို မကြိုက်ဘူးး။
ရေးတာက မောင်မောင်ဇော်လတ်ဗျ။ စာသားလေးတွေ ရှင်းတယ်။
Mr. Black – အင်း အဲဒီသီချင်းတော့ နားမထောင်ဖူးသေးဘူးဗျ။ ကျွန်တော်က အယ်လ်လွန်းဝါနဲ့
နည်းနည်း ဝေးတယ်။ အဲဒါ။
ကေဇီ – (၇) မင်းအတွက်
ဟေးးးး !!! အရာရာမပြင်နိုင်တဲ့ နေ့မှာ ကိုယ်ရို့ ၂ ယောက်ဟာ တူတူဆုံဖို့ ဖြစ်လာရော့~~~~
ကိုမျိုးကျော့ အသံထွက် အတိုင်း ဆို ပြရတာ။ ခိခိ။
သိပ်ချွဲတဲ့ လူဂျီးး၊ အသံကိုပြောပါတယ်။
သူ့ဟာသူ့ အပြင် ပါစင်နယ် ပိုင်း ဘယ်လောက် ဆိုးတယ်ပြောပြော သူ့ ရဲ့ အဲဒီ ခပ်ချွဲချွဲဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အသံမှာ မြောပါဖူးခဲ့သေးတာပေါ့။
သူ့ သီချင်းတိုင်း ဖန်တီးမှုတိုင်းကို ကြိုက်တဲ့ အထဲမှာမှ ဒီ သီချင်းရဲ့ ပထမဆုံး ဒီ စာကြောင်း နဲ့ ဆိုဟန်ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကို ကျနော့ စိတ်က အခိုက်ဆုံးဖြစ်သွားတာပါ။။
အဲဒီတော့ ဒုတိယ အကြိုက်ဆုံး “မင်းလေး ကိုယ့်ကို သတိရ ပြီးတာပဲ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို မပြောပြတော့ဘူးနော်။
Mr. Black – မျိုးကျော့မြိုင်က ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ ရှားပါးစာရင်းဝင် အနုပညာရှင်ပါဗျာ။ ပါစင်နယ်ကတော့ တစ်ပိုင်းပေါ့။
ကေဇီ – (၈) ဆွဲအားး
သူကိုယ်တိုင်ရေးတာ။ အဲဒီ သီချင်း စနားထောင်ဖူးတော့ ကိုးတန်းထင်ပါတယ်။
အရမ်းကြွေတာ။ ခက်တာက သီချင်းစာသားထဲက ကောင်မလေး ပုံစံနဲ့ ကိုယ်နဲ့က တစ်ခြားစီ။
ဆံပင်ရှည်ရှည် (ကိုယ်က အဲ့ဒီအချိန်က ဆံပင် အုန်းမုတ်ခွက်ကေ)
အရပ်မြင့်မြင့် ကိုယ့်ချစ်သူလေးးး (အရပ်က ပုတာမှ အီးပေါက်ရင်တောင် ဖုန်ထနိုင်တယ်)
ဂန္တဝင်မြောက် မင်းရဲ့ အလှ ထူးခြားလွန်းလို့ ရင်ခုန်သံ မမှန်နိုင်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းလေး ကြွေပြီ~~~
ညင်သာစွာလမ်းလျှောက်တဲ့ မင်းလေးရဲ့ အကျင့် (ဖိနောင့်နဲ့ နင်းတဲ့ခြေသံကြမ်းမို့ ဘီလူးဝင်စားသလားလို့ မေးရမယ်)
ဆင်စွယ်ရောင် ဖောရိန်းရှပ် သိပ်လိုက်လွန်းလို့ (အသားညိုလို့ ဆင်စွယ်ရောင်ကို အိမ်မက်ထဲမှာတောင် မဝတ်ဘူး)
အို! ဒီ ကမ႓ာမြေထက် သူရဲ့ ဆွဲအားကြီးးးးး
ဆံပင်တွေ ကို အလှပဆုံး ပင့်သပ်ပြီးတော့ (အဲဒီ အမူအရာကို မလုပ်တတ်တာ)
ရီဝေစွာ ဆွေးဆွေးလေး ကြည့်လိုက်တိုင်းပေါ့ (ဆွေးဆွေးတော့ မကြည့်တတ်၊ စူးစူးပဲ ကြည့်တတ်တယ်)
ကိုယ်ရင်မှာ မခံနိုင်အောင် တုန်ရီမောဟိုက်နေပြီ။
အဲ! အဲဒီလို တလွဲတွေနဲ့မှာမှ အဲဒီ သီချင်းလည်း ထွက်ရော ကိုယ်နဲ့ ဘယ်နားမှ မတူတဲ့ စာသားတွေကို အမြင်တတ်တာတစ်ဖက် ကြိုက်ခဲ့တာ တစ်ဖက် လွန်ဆွဲခဲ့ဖူးတာပေါ့။
Mr. Black – ပုံရိပ်မဲ့ ဂရပ်ဖစ် ဆိုတဲ့ စီးရီးထဲက သီချင်း။ စိုးမြတ်သူဇာကို ကြည့်ပြီး ရေးထားတယ်လို့
တောင်ထင်ရတဲ့ သီချင်း။ IC ရဲ့ သမိုင်းဦး ကာလ စီးရီးတွေထဲက တစ်ခွေပေါ့ဗျာ။
ကေဇီ – နောက်တစ်ပုဒ်က (၉) နီးနီးလေးနဲ့ ဝေးးး
ကျနော်တို့ နည်းပညာ ပဉ္စမနှစ်မှာ နေ့ချင်းပြန် ခရီး အတိုလေး ထွက်ရတယ်ဗျ။
အဲဒီမှာ ၁ရ ယောက် အုပ်စုကြီး ကားကြီးရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စုထိုင်ပြီး သီချင်းဆိုပြီး သောက်ကြစားကြ ပြောကြဆိုကြပေါ့ဗျာ။
ဆို ကြတဲ့အပိုင်းမှာ ကျနော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတယ်။
ခုနက ပြောတဲ့ နီးနီးလေးနဲ့ ဝေး သီချင်းး၊ ကျနော်အဲဒီတုန်းက ရင်ဂို သား ကျားပေါက် သီချင်းဆိုပြီး အခွေထွက်တာကို မသိဘူးဗျ။
သူငယ်ချင်း ဆို တာက ကိုယ့်ကို ဆို တာမှန်း သိတာမို့ နားစိုက်ထောင်မိခဲ့တယ်။
မုဒ် အပြည့်နဲ့မို့ တော်တော်နားထောင်လို့လဲ ကောင်းခဲ့တယ်။
အဲဒီ ခရီးစဉ်က ပြန်ရောက်တဲ့ ညတွင်းချင်းပဲ ကျားပေါက် ရဲ့ အခွေကို သွားဝယ် ခဲ့ပြီး နားထောင်မိတဲ့အထိ ဝင်စားခဲ့တာပဲ။
ဒီ “နား” က ဘာကွာလဲ မသိဘူးးး
ကျားပေါက် ဆိုတာ ကျနော့ သူငယ်ချင်းကို မမှီဘူးဗျ။
နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျားပေါက်က ကိုယ့် အကြိုက် အဆိုတော်ထဲ ပါပြီး အားပေးခဲ့ပေမဲ့ ဒီ သီချင်းလောက်တော့ ဘယ်သီချင်းကမှ စိတ်အတွင်းထဲထိ ရောက်မလာခဲ့ဘူးးး
ဒီ သီချင်းကြားတိုင်း ငို ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တစ်ချိန်လည်း ရှိခဲ့ဖူးရဲ့။
Mr. Black – BIG BAG သီချင်းတွေကို ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်ဗျ။ အလွယ်တကူကြိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ နည်းနည်း အားထည့် နားထောင်မှ ကြိုက်သွားတဲ့ သဘောပေါ့။ နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ် ပြောပါဦး။
ကေဇီ – (၁၀) နောက်ဆုံး
အယ်ဖြူ ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းးး၊
သူကိုယ်တိုင်ပဲ ရေးတယ် ထင်ပါရဲ့။
ကျနော် က အဆိုတော် ကို အသံ ပျော့ရင် မကြိုက်ဘူးး
ဒါပေမဲ့ ဒီ သီချင်းရဲ့ စာသားနဲ့ တေးသွားနဲ့ ဆိုတဲ့သူရဲ့မုဒ် နဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ ပေါင်းစပ်မှုကို အရမ်းကြိုက်တယ်။။
ရင်ထဲက ချည်နှောင်ထားတဲ့ ဒီကြိုးလေးတွေလည်းးးးး~~~
ပြတ်တောက်သွားရင် နောက်ဆုံးတော့ နာကျင်မှာတို့ ၂ ဦးပဲ~~~
ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲ။ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်မလဲ အမှောင်ညတွေ~~~
ဟူးးးး စာသားဖတ်ရတာနဲ့တင် ရင်ထဲ နစ်နေတာ။
အမှောင်ခန်းထဲမှာ နားထောင်ကြည့် ရင် အခန်းထောင့်လေးမှာ ဒူးလေးပိုက်ပြီး ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်။
ပိုဆိုးတာက ကျနော့ ဘဝမှာ ဒီ သီချင်းကို မုဒ် အပြည့်နဲ့ ဆိုပြတဲ့သူ ၃ ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
ဘာလို့ နောက်ဆုံး လို့ သတ်မှတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီ သီချင်းကို ရွေးကြလည်းမသိဘူးးး
Mr. Black – ဟေးဟေး။ ဒီသီချင်းကို ဆိုပြတဲ့သူ ၃ ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပဲ။ အထင်နည်းနည်းကြီးသွားပြီ။
ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ ဒီစကားဝိုင်းလေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်က ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာမို့ သိတ်မလတ်ဆတ်တော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ နည်းနည်းလတ်ဆတ်တာလေးတွေလည်း ပါသွားအောင် အခု လောလောဆယ် နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေး တွေ ပြောပြခဲ့ပါဦး။
ကေဇီ – အခု တလော နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေက နီနီခင်ဇော် သီချင်းတွေ များမယ်ထင်ရဲ့။ နီနီ ကို ကြိုက်တယ်ဗျ။
ကိုဘက်ဆီက လု တာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ။
သူ့ သီချင်းဆိုတဲ့ မုဒ် ကို ကြိုက်တယ်။
ခု တလော ညည်းဖြစ်ပြီး နားထဲ စွဲနေတဲ့ သီချင်းက နိုင်းဝမ်း နဲ့ ဆို ထားတဲ့ သီချင်း၊ နီနီ က ဆိုထားတာ။
အရောင် မဆိုးနဲ့ ဆိုတဲ့ သီချင်းး
နိုင်းဝမ်းပဲ ရေးထားတာ။ မူရင်းက ကိုရီးယား သီချင်းး
နီနီ အသံ နဲ့ ဆိုပေါက်က ပိုကောင်းတယ်။
Mr. Black – ရုပ်ရှင်သီချင်းတွေထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းများ ရှိဦးမလား။
ကေဇီ – မူပိုင်ချစ်သူ ရုပ်ရှင်ထဲက မီမီဝင်းဖေ သီချင်း။ နောက် မူပိုင်ရှင်မကြီး မမခိုင် သီချင်း။
နောက် ရင်ခွင်နန်းတော် ဆိုတဲ့ ဘိုဘို နဲ့ မီမီဝင်းဖေ ဆိုထားတဲ့ သီချင်း။ အဲဒါတွေကို မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်တယ်။
Mr. Black – အခုလို အချိန်ပေးပြီး တကူးတက ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ မကေဇီ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ။
ကဲ…။ ကျွန်တော် ဘလက်ချော နဲ့ မကေဇီတို့ရဲ့ မြူးဇစ် ဒိုင်ယာလော့ခ် ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျေနပ် နေတတ် ကြပါစေဗျာ။
ဗျူးးး တဲ့ သူပရိုကျ သလောက်….
…ဖြေတဲ့ သူ က မျက်နှာပိုးးး မသေပါလားးးဟေ!!!
အယ်ဖြူ နဲ့ ဘစ်ဘက်ကြိုက်တာ တူတယ်.. ကျန်တာတော့ တူဘူး.. ဝေထွန်းတီးတာက ခရမ်းထက် ကောင်းတယ်.. အခုတော့ မသိဘူး.. နောက်ပိုင်း ဝေထွန်းက ငပျင်းကလပ်မှာ ဦးသာနဲ့ တီးတယ်… မြေအောက်က ကြိုး ဆရာ ကြီး နဲ့ တဘန်ထဲပေါ့…
ဘယ်သူက ပိုတော်လဲ မတော်လဲ။ နားလည်ဘူးးး
တူရိယာ တီးတဲ့ထဲ ဒရမ်မာတွေ မြင်ရတာ စတိုင်ကျတယ်လို့ မှတ်လို့လားမသိ။
ကိုသန်းနိုင်ကိုလည်း ဒရမ်တီးတတ်မှု နဲ့ချစ်
ဇော်ဝင်းရှိန်တုန်းကလည်း ဆံပင်တွေ ဝဲနေအောင် ဒရမ်တီးတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးကို ချစ်၊
ရင်ဂို ကြီး ကျတော့လည်း ဒရမ်တီးတဲ့ စတိုင်လေး မိုက်လို့ ချစ်ရပြန်
ဝေထွန်းကတော့ ဒရမ်တွေနောက်က မြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်လေးကိုက ချောလို့ ချစ်။
တစ်ယောက်သောသူကလည်း ဒရမ်မာ မို့ ချစ်ရပြန် ဟန် ဟန် ဟန်!!
အဘတို့က အဲဒီသီချင်းတွေနဲ့ ဝေးသကွယ် ၊
မောင်မောင်ညွန့် ( ပွင့်ဦး ) ၊ တွံတေး ( ပန်းနွယ်ကစိမ်း ) ၊ လွှမ်းမိုး ( မေ့ကွက်ကိုရှာ – မူရင်းက မာမာအေး ) ၊ အနိူင် ( အသည်းပိုလေး ပေးသနားပါ ) ၊ အောင်သူ ( ရင်နင့်ပန်းကလေး နှင်းဆီ ) ၊ ကိုသန်းလှိုင် ( ကံ့ကော်မြိုင်တန်း ) ၊ ကိုတင်လှိုင် ( ယောင်္ကျားမှာလည်း အသည်းနဲ့ပါ ) ၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ် ( ဇရာအိုလွမ်းတေး ) ၊ ဗညားဟန် ( သမုဒယဝါဆိုမိုး ) အဲဒီသီချင်းတွေကတော့ ကေတီဗီသွားတိုင်း ဆိုနေကျပေါ့လေ ၊
အဘ ဆိုတတ် မဲ့ သီချင်းတွေနဲ့တော့ သမီး မဝေးဘူး အဘ။
မွေးသဖခင် ဆိုတာမို့ အကုန် နားယဉ်တယ်ရယ်။
ဂျင်နရေးရှင်းတခုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ အကြိုက်တွေတူနေတယ်ထင်မိတယ်..။
တင်ဇာမော်နဲ့.. မဒီအကြောင်းများ.. ချွတ်စွတ်..
အနော်တို့ က မမော် နဲ့ မဒီ ခေတ်မှာ လူလားးးမြောက်!!!
ပွဲ နီး ပြီမို့ အလုပ်များ နေပြီလား။
တစ်သန်း တန် လက်မှတ် ကိုကြားပြီး ပြုံးမိသေးတယ်။
ကျောင်း ရံပုံငွေ အတွက် ဝမ်းသာမိတယ်။
ဇာတ်လမ်း တွေ ကြားဖို့ မျှော်နေပြီနော။
FB ထဲ ပုံတွေ တွေ့တယ်။
ကျောင်းထွက် သူဌေး တွေအများကြီး ကို အခုမှ သိရတော့တယ်။
ဘလက်-ဇီ ဒိုင် တွေထဲက
တစ်ချို့ သီချင်း တွေ သိ၊ တစ်ချို့ မသိ။
ဒါပေမဲ့ မာရဇ္ဇ နဲ့ မျိုးကျော့မြိုင် ရဲ့ သီချင်း နှစ်ပုဒ် ကတော့ လက်ရွေးစဉ် ကူး ထား တဲ့ အထဲ ပါလို့ ဆံပင် မရှည်နိုင်တော့ တဲ့ ဘွ မှာလဲ အခု ထိ နားထောင်နေဆဲ။
မိန်းမ အဆိုတော် သီချင်း တွေ ကို တော့ ခွေလိုက် မကြိုက်ဘူး။ တစ်ပုဒ် စ နှစ်ပုဒ် စ ကြိုက်တယ်။
မေဆွိ၊ မေခလာ သီချင်း တွေထက် တင်ဇာမော် နဲ့ ထွန်းအိဒြာဘို ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။
တင်ဇာမော် နဲ့ အပြိုင်လား၊ အရင်လား မသိဘူး။
အေးချမ်းမေ ကိုတော့ အတော်ကြိုက်ခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေ ဖွင့်စ က သူဌေး ရဲ့ နောက် က စက်ကပ်ကျေး အချောလေးတွေထဲ က တစ်ယောက်ပေါ့။
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ စီးရီး ထဲက တော်တော်များများ ကြိုက်တယ်။
“စာမျက်နှာ” ဆိုတာကတော့ အခုထိပါလာဆဲ။
ဖြူစင်ချိန် ဟိုတစ်ချိန်က ရှင်းသန့်လှပ ငယ်စဉ် စာမျက်နှာ…
ဒါဏ်ရာ ရောင်စုံတွေ ဒီအရွယ်မှာ ဖျက်မရစွန်းထင်းနေ အဖြစ်များစွာ…
စာအုပ်တစ်အုပ် သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကို ရှေ့ဆက် ကိုယ် ဘာရေးမလဲ…
တစ်ကြိမ်တွင် ပြန်လည်ကာ ဖတ်ရှု ကြည့်လိုက်ရင် တကယ်တုံလှုပ်စရာ
မြင်ရာ ထင်ရာတွေ ရေးသားဖူးခဲ့ပြီ ဘဝထဲမှာ
ရိုးသားတဲ့ စိတ်နဲ့လေ မိုက်မဲ မှားယွင်းခဲ့ဘူးတာ
ဒါထက် အေးချမ်းမေ မျက်နှာလေး က ဇီဇီ နဲ့ တူသလားလို့။ အထင်။
အေးချမ်းမေထွက်တော့ ကျနော် ၆ တန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ မမော်တို့ထက် စောပါတယ်။
သူ့ သီချင်းရယ် သူ့ အသံလေးရယ်က လိုက်ဖက်ပြီး သိပ်နားထောင်ကောင်းပေမဲ့ အကြိုက်ဆုံးမဖြစ်ခဲ့။
ဆို လို့ တော့ ကောင်းတယ်။ သူ့သီချင်းတွေက။
အနော် မက်နှာ စစ်စစ်ကို အရီး ကို ပို့ အူးမှပါ။
ဒါမှ ဘယ်လောက် ဝ အဲလေ ဘယ်လောက် လှတုန်း သိရအောင်။
– ၈ တန်း က နေ ခု ချိန် ထိ စွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သူ…
– ကိုယ်သာ ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ရင် သူ့ ကို ရအောင် ယူမှာပဲ လို့ တွေးမိရလောက်အောင် ချစ်တဲ့သူ…
– ဘယ် အမျိုးသမီး အဆိုတော် ဘယ်လောက်တော်တော် သူ့ကို မမှီဘူးလို့ ပဲ အမြဲတွေးနေဖြစ်အောင် အသံကောင်းတဲ့ သူ…
– ပိုက်ဆံများရှိလို့ကတော့ သူ့ တစ်ယောက်တည်း ဆို တဲ့ စတိတ်ရှိုးကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ထိုင်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်မိသူ…
– သီချင်းဆိုနေချိန်တိုင်း သူလှဖို့၊ ကြည့်ကောင်းဖို့ အာရုံမရှိပဲ သီချင်းထဲမှာပဲ ဈာန် ဝင်စားတဲ့သူ…
– မျက်လုံးမှာ မာယာ အရိပ်အယောင်မပါပဲ သီချင်းဆိုတတ်သူ…
သများရဲ့ မမော် အပေါ် ချစ်ခြင်းတွေ။
အနော့ကို တင်ဇာမော်နဲ့ တူတယ် ပြောကြတာ။
အမ်အိုင်တီ တင်ဇာမော်ပါ ဆို။
ဟေ့ဟေ့ စိတ်ကူးနဲ.ရူးသီချင်း ကျုပ်လဲသိပ်ကြိုက် ကေတီဗွီသွားရင် အဲသီချင်းအမြဲဆို.. အိမ်မှာလဲ ဂစ်တာနဲ.ဆို..
နောက်ကြုံရင် ဆိုပြအုံးမယ်.. ခစ်ခစ်..
ဒါနဲ.နေပါအုံး.. အင်တာဗျူးတာ အေးဆေးမဖြေပဲ သူ စွံတာတွေ ထည့်ကြွားသွားသေး.. အံ့ဩဘ.. စွံတာမယုံပေါင်အေ.. အဲလောက်စွံရင် ညည်းဖြင့် အခုလို အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မနေပါဘူးအေ အန်တီကေဇီရယ်….. ဟေးဟေးဟေးး
အဲလို ကြွားစတန်းဆို ဟို အင်တာဗျူဝါ ကြီး ကိုဘလက် ကျုပ်လာမေးစမ်းပါ… မိုးလောက်ကြီးချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ. ၁၂ယောက်လောက် အိမ်ရှေ.လာအော်တဲ့ ကောင်မလေးဒွေ အကြောင်း ပြောပြချင်လွန်းလွန်းလို.. ခိခိခိ
နာ့ မှာ ကျန်တာ ဆိုလို့ ဒီ လေ ပဲ ရှိတာ။
ရန်ကုန်လာမှ နိ အိမ်ရှေ့ကို လက်ဆွဲ ခေါ်လာအူးမဟဲ့ တိုက်တိုက်ရဲ့။
နာ့ မြန်း အထင်သေးလို့။
ဒုက္ခပေးနေတာ ၈ ရက်သားသမီး မပြည့်သေးလို့ စောင့်နေတာ နိ ပါ ပါသွားချင်သလားးး
လာမှ စိတ်ကူးနဲ့ ရူး သီချင်း သွားဆိုရအောင်။
ညည်း အသံ ကောင်းသလားးး
ဝန်ခံပါတယ်။အဆိုတော်တွေကိုသိဖူးကြားဖူးပေမယ့် အဲဒီ သီချင်းတွေကို လုံးဝမသိခဲ့ဘူး။
အော် ..ဂီတဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ဝေးမှန်းသိပါပြီ၊
တစ်ကြောင်းဖြတ်ရသက်သာတယ်ပဲ မှတ်ပါ အာတီဒုံရေ။
ကျနော်တော့ ခုထိ နစ်တုန်းးး
ကြိုက်ပါတယ် တင်ဇာမော် မဒီ ဟန်ထွန်း အေးချမ်းမေ
တင်ဇာမော်ရဲ့ သမီးလေးလည်း တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်
အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာတောင် နောက်အိမ်ထောင်တခုကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထူထောင်ပြီး အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝကို ဖန်တီးထားနိုင်လို့ ပိုသဘောကျတယ်။
ခုတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို ကြိုက်နေတယ် ပေါက်ကွဲပြီးအော်လို့ရလို့
ဟုတ်တယ်။ ဟိုက သူ့ကို ချစ်ပြီး အလိုလိုက်ချက်။
စိတ်ရင်းကောင်းရင် အကျိုးပေးကောင်းပါတယ် ဆို!!
ဖြူဖြူ သီချင်းကတော့ ကြိုက်တယ်။
လူရော အသံရော ဖန်တီးနိုင်မှု ရော ကြိုက်တယ်။
စိတ်ထဲ စွဲ တဲ့ သီချင်းမရှိလို့သာ။
~တောင်ပံခတ်သံ ~အချက်တိုင်းမှာ ~ချစ်ဒယ်~~ ချစ်ဒယ် ~~ဆိုတဲ့ ရိုက်ချက်များ
~ရွှေနားတော်အပါးဆီ~ ပဲ့တင်မြည်ဟည်းလို့ ~~ချစ်ဒယ်~~ အရမ်းဘဲ ချစ်နေဘီ~~
ကျော်တို့ခေတ်က အက်ဆစ် တို့ သီအိုရီတို့ ခေတ် —
ဆယ့်ခြောက်နှစ်နဲ့ ရီးဇားထားဖို့ မစင်းဇားနဲ့ ~~ ရီးဇားများလို့ နံမယ်ပျက်တာမကောင်းပါကွယ် ~~
ဆယ့်ခြောက်နှစ်နဲ့ ရီးဇားထားဖို့ မစင်းဇားနဲ့ ~~ ရီးဇားအူးနဲ့ညားဒယ်ဆိုဒါ ရှားဘာဒယ် ~~
အခုတော့ နားထောင်ဖစ်နေတာက — မင်းရဲကျော်စွာဘိုနေတိုး~~~ လွှမ်းပိုင် !! နဲ့ …..
လူလိန်လူညာဂျီးအာရွှီးတဲ့ ကိုကို ~~ ဘာညာသာရကာသူပျောပီးကွာ သများအသဲကို ဒလို ~~
အချစ်က ~~ မိုးလောက်ကျီးပါလို့ ပျောဒဲ့ကိုကို ပျောဒဲ့ကိုကို ~~
အမတို့က အဲဒီ အစ ကနဦး နားထောင်တဲ့ အပိုင်းက စိတ်ထဲ အရောက်ဆုံးမို့ ပြန်စဉ်းစားရင် ကိုယ့်ခေတ်က သီချင်းတွေပဲ ထွက်လာတာ။
နောက်ပိုင်းတော့ ခုထိတော့ သွားရင်းလာရင်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။ အဆက်တော့ မပြတ်။
ဒါမဲ့ ကြိုက်တယ် ပြောချင်တဲ့ အဆိုတော်လေးတွေက အသက်အများကြီးငယ်တော့ အဆူခံရလွန်းလို့ ပြောတော့ဘူးးး
ဒါနဲ့ အရင်တုံးက ကွကိုကွန်းမန့် အက်ဒစ်လုပ်လို့ရသလားလို့ အခုမတွေ့ဝူးနော့် @_@
ဒက် သိအောင်ပြောလိုက် လေ။
ဟိ.. အဲ့ ၄ ပုဒ်ပဲ သိတယ်ရယ်.. ကျန်တာတွေက ကြားဖူးနားဝတော့ ရှိပါတယ်ရယ်… သနားဖို့ကောင်းအောင် ပြောလိုက်ဦးမယ်.. သများ သီချင်းနားထောင်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ ဆိုင်က တိတ်ခွေငှားပြီး နားထောင်ဖြစ်တာ.. အခွေက ရတနာဦးရဲ့စင်ဒရဲလားသီချင်းခွေ.. သိပ်မကြာဘူး.. ကက်ဆက်ပျက်သွားတော့.. ဘာသီချင်းမှ နားမထောင်ဖြစ်ဘူး.. ဆယ်တန်းရောက်တော့ sony walkman လေး လက်ဆောင်ရလို့ နားထောင်တာ.. အချစ်မျက်ဝန်းခွေ နဲ့ အချစ်ငှက်ခွေ.. အဲဒီဝေါ့မန်းလေးပျက်သွားတော့.. အဆောင်မှာ ဘာသီချင်းမှ နားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူးရယ်.. ဒါကြောင့် သီချင်းတွေကို သိပ်မသိဘူးလို့..
သများတော့ သီချင်းရယ် ရုပ်ရှင်ရယ် ရွာရယ် ဖေ့ဘုတ်ရယ် မှာအလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့
ကျုပ်ကတော့ သျှီရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့ဖူးတယ်…
ဘာလို့များ မြန်မာပြည်ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောမိန်းမ Rocker စစ်စစ်ကြီးကို သတိမရကြလဲမသိ…
သီချင်းကြိုက်တာကိုပဲ ဦးစားပေးရတော့ မပါတော့။
လူကိုလည်း သျှီ ကို သိပ်မကြိုက်။
ဂျင်း နဲ့ ရှပ်ကွက် ဝတ်တာလေးကို သဘောကျတာကလွဲလို့။
.သီချင်းနဲ့ပါတ်သက်လို့တော့…ထီးဆိုင်၊ သန်းနိုင်၊ ဘိုဘိုဟန်၊ လွှမ်းမိုး၊ တူးတူး၊ ကိုင်ဇာ၊ စိုးပိုင်…အင်း..
အာ့ ဆို မိုက်မိုက်နဲ့ ဆိုဖို့ အဲဒီ အဆိုတော်တွေ သီချင်းတွေထဲက ရွေးထားရမားဟမ်??
ပို့စ် အကြွေးတွေပေးဆပ်ဖို့ ~~~~ ~~~ ဘလက်အချစ်တွေပြသဖို့ ~~~
ပြန်ခဲ့မယ် ဂဇက်ရွာကိူ ~~
…… ပြန်လာမယ် ဂဇက်ရွာကို .~~~~~~
အီးးးးးးးးးးးးး မဲမဲဂျီး မဲမဲဂျီး :byee: ဘာမှညင်ရဘု။
တညားကို မမြင်ပဲ ကိုဂျီးဘက်ကိုပဲ ညင်ရလို့လားဟင်??
ဒေါ်ချွိနဲ့တူတာဆိုလို့.. ဝေထွန်းကိုကြိုက်တာ တစ်ခုတည်းရှိပါလား.. တူရိယာသံတွေထဲ Bass သံနဲ့ ပီယာနိုသံတော့ တော်တော်ကြိုက်တာ.. သများရုပ်ရှင်ကြည့်လေ့မရှိပေမယ့်.. သချင်းတွေဆိုရင်တော့ မိုနိုကလွဲ.. အကုန်နားထောင်ဖြစ်တယ်.. အိုင်စီအဖွဲ့အသဲစွဲ.. လေးဖြူတို့..အငဲတို့ အိုးခြမ်းကွဲသံကြီးတွေနဲ့ အလွမ်းသချင်းတွေဆို.. အသေခိုက်တာလား.. :loll:
လူကြမ်းကြီးတွေ အဆွေးသီချင်းထက် အမြူးသီချင်းတွေကို ကြိုက်တယ်။
အဆိုတော် အမျိုးသားထဲ အသံသီးသန့် လူသီးသန့်တော့ ကိုသန်းနိုင်ကလွဲလို့ ဘူ့မှ မကြိုက်။
ကျုပ်တော့ ပြည်လှဖေ နဲ့ ဒေါ်မေရှင်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ
တော်တော်များများကို မနောလည်း နှစ်သက်သဘောကျမိတယ်။ တော်တော်များများ မနောနဲ့ အကြိုက်တူတယ်။ မှတ်မိပါသေးတယ် မနော နောက်ဆုံးနှစ်မှာ စည်သူလွင်ရဲ့ မျက်ဝန်းသီချင်းက လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားခဲ့သလို မနောလည်း ဒီမျက်ဝန်းနဲ့ဆုံမယ့်သူကို လိုက်ရှာနေမိခဲ့တယ်ပေါ့လေ… ဟိဟိ
စည်သူလွင် မျက်ဝန်းသီချင်းက အော်ဆိုလို့လည်း ကောင်းသေးရဲ့။
အင်းတချိန်တုန်းကတော့ သီချင်းတွေရူးခဲ့ဖူးတာပေါ့ကွယ်။ အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ထိစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သေးသကိုး ခုနောက်ပိုင်းတော့ သီချင်းတွေနဲ့ဝေးဝေးနေသလိုပဲ။ ငယ်ဘဝလေးပြန်လွမ်းလိုက်တာ။
ကျုုပ်မသိတဲ့ အကြောင်းတွေ ဝင်မဖောတော့ပါဘူးအေ
လေးပေါက် မသိတဲ့ ဂီတ အကြောင်းအရာ များရှိသေးသလားးး
စကားဝိုင်း တစ်ခုတောင် ဖန်တီးချင်ပါရဲ့။